Muxuu James Swan ku macneeyey weerarkii lagu qaaday ciidamada dowladda? - Banaadisom
Home Wararka Maanta Muxuu James Swan ku macneeyey weerarkii lagu qaaday ciidamada dowladda?
Muxuu James Swan ku macneeyey weerarkii lagu qaaday ciidamada dowladda?
Muqdisho (Banaadirsom) – Wakiilka gaarka ah ee Xoghayaha-Guud ee QM u qaabilsan Soomaaliya, James Swan ayaa maanta ka hadlay weerarkii ay shalay dagaal-yahaanada Al-Shabaab ku qaadeen xarumaha ciidamada Dowladda ee Awdheegle iyo Bariirre ee Shabeellaha Hoose.
Dowladda ayaa dagaalkaas ka sheegatay guulo, halka taasi badalkeedana ay sheegatay Al-Shabaab oo baraha bulshada ay ku leedahay ku baahisay inay dagaalkaas kaga dishay Ciidanka dowladda illaa 47 askari, kuna furatay saanad ciidan iyo illaa lix gaadiidka dagaalka.